Barnaamijka caanka ah – Bogga 6 – Android – Vessoft
AndroidBarnaamijka caanka ah – Bogga 6
Camfrog – sheeko caan ah oo fiidiyoow ah oo lagula hadlo dadka isticmaala adduunka. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isla joogtid dhowr qol oo lagu sheekeysto oo aad ku wada xiriirto qaab muuqaal fiidiyow ah.
Tool si ay ula xiriiraan dadka dunida ku. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u sameyso wicitaano cod ama video ee tayo sare leh iyo fariimo ay isdhaafsadaan ah.
Fududahay in la isticmaali codsiga si aad u hubiso xawaaraha ee la xidhiidha internetka. Software soo bandhigayaa warbixin ku faahfaahsan oo ku saabsan xawaaraha la isugu gudbiyo ama qaabilaadda ee xogta.
Hangouts – farriin caan ah xagga qoraalka, codka iyo isgaarsiinta fiidiyaha. Sidoo kale, softiweerku wuxuu la macaamilaa codsiyada badankood adeega Google ee caanka ah.
Tababaraha file waxaa ka mid ah qalab badan oo maamulka xogta ku ool ah qalabka. Software wuxuu taageeraa oo dhan hawlgallada file ugu weyn ee xogta systemic iyo waxa la qariyey.
Codsiga rasmiga ah ee dukaanka digital ka adeegga caanka ah Ubisoft. In software waxaa jira noocyo kala duwan oo badan oo kulan kuwaas oo la heli karo si ay u soo bixi.
Software in la abuuro collages oo tayo sare leh oo muujinaya in slide. Software ka kooban qalab iyo saamaynta u dil oo nadiif ah mashaariic kala duwan oo badan.
Software la set badan oo ah qalab iyo saamaynta si loo farsameeyo sawirada. Codsiga macaamila camera ka mid ah qalabka iyo taageerada goobaha kala duwan si ay u abuuraan oo sanamyada tayo sare leh.
Mobogenie – waa qalab shaqeynaya oo lagu maareeyo waxyaabaha aaladda lagana soo dejiyo codsiyada adeegga Mobogenie. Software wuxuu kuu oggolaanayaa inaad fuliso gurmad.